इराकमा पुलबाट हाम फाल्ने ती महिला को थिइन ? जसलाई नेपाली भनेर भाइरल बनाइयो – PrawasKhabar
इराकमा पुलबाट हाम फाल्ने ती महिला को थिइन ? जसलाई नेपाली भनेर भाइरल बनाइयो
२०७७ पुष १८ गते १५:४२
कुर्दिस्तान । इराकको कुर्दिस्तानस्थित सुलेमानी नयाँ वर्षको आफ्नै मुडमा थियो । नयाँ बर्ष २०२१ को स्वागत गर्न सुलेमानी शहर आफ्नै सुरमा थियो । तर, यसैदिन बेलुका ७ बजे एउटा नमिठो खबर भाइरल भयो । खबर नेपाली समुदायसँग सम्बन्धित थियो । सुलेमानिको स्थानीय टेलिभिजनमा नेपाली महिलाले पुलबाट फाल हालेको समाचार प्रसारित भयो । सुलेमानिमा रहेका नेपाली समुदाय यो समाचार सुनेर हतप्रभ हुनु स्वभाविक थियो।
समाचार प्रसारण भएको अर्को दिन स्थानीय नेपाली समुदाय नेपाली भनिएकी ती महिलालाई भेट्न चौतर्फी दौडधुप गरे । अथक प्रयत्नपछि पुलबाट फाल हालेकी भनिएकी ती महिला स्थानीय अस्पतालमा भर्ना भएको भेटिइन । तर यथार्थ फरक थियो । नेपाली भनिएकी ती महिला इरानी रहेको खुलासा भयो।
नेपाली समुदायलाई समस्या पर्दा सधैं सहयोग गर्दै आएको स्थानीय सामाजिक संस्था एफ डब्लुसीडीओका संस्थापक हामा महम्मद हाजारको सक्रियतामा उक्त तथ्य खुलेको हो । हाजारकै सहयोग लिएर स्थानीय नेपाली समुदायले समाचार प्रसारण भएको के २४ न्युज च्यानलमार्फत उक्त महिला नेपाली नभएर इरानी रहेको भन्दै समाचार सच्याइएको थियो।
राष्ट्रिय धान दिवस : कृषी मन्त्री यादवले मेसिन चलाएर रोपे धान
एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई कतारको बधाई
‘एनआरएनए अमेरिकाको विज्ञ सम्मेलन नेपालका लागि पनि उपयोगी हुनेछ’
विदेशका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न कार्यविधि एकहप्ताभित्रै
कतारमा महिला श्रमिकको स्वास्थ्यबारे छलफल
एनएआरएन कतार महिला विभागको सहकार्यमा श्रमिकका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना